Ebe a na -ere Carbide
Adalata Fit njide
Reaming nhazi nsogbu isii na azịza ya
Aperture na -abawanye, njehie ahụ buru ibu Obosara dị elu nke reamer dị oke ma ọ bụ na nsọtụ reamer bụ burr; Mbelata oke dị oke elu; nri na -ezighi ezi ma ọ bụ nnyefe nhazi oke; Reamer isi ntụgharị ihu n'akuku buru oke ibu; Reamer na -ehulata; Ọnụ mbepụ nke reamer ahụ dabere na ...
Na nhazi, ọtụtụ mgbe na akuku mma mmiri ma na -eduga na ihe ngosi nke ịcha, ma ọ bụrụ na iji ngwa ezi uche na ụzọ nhazi, nwere ike belata ohere nke mma mmiri. Mmekọrịta nke nrụrụ ngwaọrụ bụ: Site na usoro dị n'elu, anyị nwere ike mata na enwere t ...
Ọkụ ọkpọ HSS ọkachamara
N'ime ọtụtụ afọ, anyị ejirila ma/ma ọ bụ nwalee ọtụtụ bits maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile. Na nyocha a, anyị chọrọ ikpebi egwu kachasị mma maka ngwa igwe. Nke a gụnyere igwe siri ike, igwe anaghị agba nchara, aluminom, wdg. Anyị chọdịrị ịhụ ụdị ihe ga -egwu ...
Isi nke mkpuchi Ngwaọrụ
Teknụzụ mkpuchi ihe eji arụ ọrụ bụ teknụzụ mgbanwe elu nke etolitere na nzaghachi ahịa. Ebe ọ bụ na ọ pụtara na 1960, a na -ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ na -emepụta ihe na -akpụ akpụ.
Omume ịma jijiji n'oge usoro CNC Milling
Na igwe igwe CNC, ịma jijiji nwere ike ime n'ihi enweghị ike nke ịcha ngwaọrụ, ihe eji arụ ọrụ, ngwaọrụ igwe, ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ndozi, nke ga -enwe mmetụta na -adịghị mma na izi ezi nke igwe, ịdị elu ya na arụmọrụ ya nke ọma. kwesịrị ịbụ ...
Nhazi eriri bụ iji ngwaọrụ nhazi eri iji hazie ụzọ dị iche iche nke ime na mpụga. Nke mbụ, ịcha eri n'ozuzu na -ezo aka na usoro nhazi eriri na workpiece nwere ngwa ọrụ ma ọ bụ abrasive, ọkachasị gụnyere ịtụgharị, egwe ọka, ịpị eriri aka grindi ...
Greenleaf na-ewepụta igwe ihe ọkụkụ seramiiki siri ike, nke na-arụ ọrụ nke ọma
Greenleaf Corp. dị na Saegertown, Pennsylvania, wepụtara XSYTIN-360, ahịrị ọhụrụ nke igwe ihe ọkụkụ seramiiki siri ike dị elu, gaa n'ahịa ụwa. N'ime nzukọ Zoom zuru ụwa ọnụ na-ekwupụta igwe ihe ọhụrụ, Jim Greenleaf, onye isi ala na onye isi nke Greenleaf Corp., kwuru na XSYTIN-360 bụ "otu n'ime ...
Ka anyị hụ ka e kwesịrị isi mee ihe na -agwụ ike
Nkenke nke na-agwụ ike dị oke elu, nkenke nha nke ihe na-agwụ ike nwere ike iru IT8 ~ IT7, enwere ike ịchịkwa oghere n'ime nkenke 0.01mm. Ọ dị mma. Maka ihe na -agwụ ike n'ozuzu ya, ịdị elu nke ala R ...
Ụzọ 8 iji gbuo igwe nri gị
1. Ịgba ya ọsọ ọsọ ma ọ bụ dị nwayọ Ịchọpụta ezigbo ọsọ na nri maka ngwa na arụ ọrụ gị nwere ike bụrụ usoro mgbagwoju anya, mana ịghọta ezigbo ọsọ (RPM) dị mkpa tupu ịmalite ịrụ igwe gị. Ịme ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ike ibute oke mgbawa suboptimal ma ọ bụ ọbụna ọdachi ...
CNC ngwaọrụ ihe nhọrọ
Ka ọ dị ugbu a, ihe akụrụngwa CNC a na-ejikarị eme ihe gụnyere ngwaọrụ diamond, cubic boron nitride tools, seramiiki ngwaọrụ, ihe mkpuchi, ngwa carbide na ngwa nchara dị elu. arụmọrụ indexes nke dị iche iche t ...
igbe ozi nicogao@speedleopard.cn